Economy – Business Plus Television
Saturday 17 August 2019 / 8:26 pm
काठमाडौँ, २२ पुस । नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा तीन जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ । संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा शुक्रवार टेलिकमका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्यसहित डिल्ली…
काठमाडौं, १४ मंसिर । नेपाल हाइड्रो एण्ड इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड, बुटवलमा कार्यरत मजदूरहरू पारिश्रमिक वृद्धि गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आफूहरूका माग संवोधन गर्न पटक–पटक व्यवस्थापक र सञ्चालक…
मलेसियाको रोजगारी सुचारु गर्न सरकारले पहल नगरेको आरोप, मंसिर १९ भित्र श्रम स्वीकृती खुल्ला
काठमाडाैँः नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले दातृ निकायको ऋण सहयोगमा संचालित आयोजनामा सरकारले कामै गर्न नसक्ने गरी मापदण्ड तय गरेको उल्लेख गर्दै आपत्ति जनाएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मंगलबार…
सरकारी नियमविरुद्ध अहिले ट्याक्सी चालकहरु रुष्ट (भिडियो सहित )
काठमाडौं, ९ असोज । भाद्र ६ गते महानगरीय ट्राफिक महाशाखाले सुन्धारामा विशेष कार्यक्रम गरि राजधानीमा ट्याक्सी चलाउने चालकका लागि अध्याँरोमा टल्कने र टाढैबाट प्रष्ट देखिने फ्लोरेसेन्ट ज्याकेट अनिवार्य लगानुपर्ने व्यवस्था लागू…
काठमाडौं, ९ असोज । भारतको जयनगरदेखि नेपालको जनकपुरसम्म निर्माणाधिन रेलमार्गमा आगामी पुसदेखि रेल संचालनमा आउने भएको छ । पुससम्ममा रेलमार्गको आवश्यक पुर्वाधार, सिग्नलिङ, स्टेशन निर्माण लगायतका सबै तयारी सकेर संचालन गर्ने…
काठमाडौं, ९ असोज । बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले तारवार नगर्दा कृषकहरु पीडित हुँदै आएका छन् । निकुञ्जबाट रातमा आउने बँदेल, चित्तल, खरायो, बाँदर, हात्तीजस्ता जनावरले बाँलीनाली सखाप पार्ने गरेको…
काठमाडौं, १८ भदौ । हालसम्म जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुले नै लघु बिमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । अब भने बीमा विधेयक पास भएमा छुटै लघुविमा कम्पनी खोल्न सकिने भएको छ…
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष भित्र व्यापार घाटा न्यूनिकरण कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना
काठमाडौं, ३१ साउन । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष भित्र व्यापार घाटा न्यूनिकरण कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना अघि सारेको छ । मुलुकमा व्यापार घाटा बढ्दै गईरहेका बेला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले…
मुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले गरिब जनतालाई करको मारमा पारेको दाबी
काठमाडौं, ३१ साउन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले गरिब जनतालाई करको मारमा पारेको दाबी गरेको छ । अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गरिव जनतालाई…
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच देखिएको करसम्बन्धि विवाद छिट्टै समाधान गर्ने आश्वासन
काठमाडौं, ३१ साउन । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सर्वसाधारणलाई करको मारमा पर्न नदिन सरकार सचेत रहेको बताउनु भएको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच देखिएको करसम्बन्धि विवाद…